Amaswidi → Izembatho ezisebenzayo • Imishini efekethisiwe yekhompyutha ye-P & M
Amahembeeduze kwayo ibhulukwe i Izikibha, ayisethi eyisisekelo yezingubo zabasebenzi ezimbonini eziningi. Izinhlobo ezahlukahlukene ezitholakala kwezethu esitolo inika amandla ukukhethwa komkhiqizo ngokuya ngokusetshenziswa okuhlosiwe noma okuthandwa ngumsebenzisi.
Amaswidi wokusebenza futhi nsuku zonke anehluzo zakho
Amamodeli ahlinzekwayo enziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, umsebenzi wazo ukumelana nokusebenza kwawo nokuvikela izimo zezulu ezinzima.
Ama-Sweatshirts yimishini eyisisekelo yabamele izimboni eziningi, kufaka. ukwakhiwa, ukukhiqizwa noma ukuphathwa kwezinto. Bakweleta ukusetshenziswa kwabo okuguquguqukayo kuzakhiwo ezisebenzayo - ngaphandle kokunikeza imfudumalo emoyeni noma emakhazeni, futhi bavumela inkululeko enkulu yokuhamba kunamajakhethi, ngenkathi bevikela izingubo zangasese.
Sinikeza amamodeli azo zonke izinkathi zonyaka eziguqulelwa ezimeni zezulu ezahlukahlukene noma ama-jumpers esikhashana entwasahlobo noma ekwindla.
Sikunikeza amajakhethi omsebenzi ngamanani ahlukile ngokuya ngemodeli - kusuka kokuyisisekelo kakhulu ukucebisa ngenhloso ekhethekile
Akhiwe kakhulu nge-polyester, ehlinzeka ngokufakwa okushisayo okukhulu, futhi ngaleyo ndlela kube nenkululeko enkulu yokuhamba kune-classic amajakethi omsebenzi.
Ngaphezu kwalokho, amamodeli amaningi anama-collars wokuma wokufakwa okushisayo namaphakethe asebenzayo aneziphu. Sinikeza ama-sweatshirt anemibala ehlukahlukene, enemikhono emide futhi emifushane, kanye nohlamvu isexwayiso ngezinto ezibonisa.
Izingubo ezibukisayo izolungela abasebenzi basemgwaqweni, abezokwakha noma abasebenzi abasebenza sekuhlwile.
Amahembe okusebenza izinkampani ezifana Reis noma Stedman ezenziwe ngezindwangu ezingamelana nokusetshenziswa kakhulu.
Ukuvikela izinto ezivezwe umhuzuko, izakhi ezikhethekile zokuvikela zithungelwe kumamodeli akhethiwe. Futhi, ezinye izitayela ziye zanothiswa ngama-vents ukunciphisa ukujuluka ngesikhathi sokuzivocavoca okukhulu.
Amamodeli amaningi anama-welts entofontofo okhalweni nasezihlakaleni ukuvikela ekulimaleni kwezingubo zangasese noma ukungcola.
Kusendalini kukhona: amajakhethi ezoboya, amajakhethi okusebenza, amajakhethi e-polypropylene, amajakhethi okuxwayisa, amajezi
Amahembe okusebenza nge-imprint kuvame kakhulu futhi ngoba kulingana nenhlobo eshibhile yokukhangisa. Unalokhu engqondweni, cabanga ngendlela yokumaka esezingeni eliphakeme emelana nomonakalo, ukulahleka kombala nokuwasha izinga lokushisa okuphezulu. Kungakho siyincoma ukuthi kwenziwe kube ngokwakho ukugqokwa kwamakhompyutha.
amasiketi womsebenzi wabesilisaama-sweatshirt asebenza ngoboya besilisaamabhantshi okusebenza koboyaamajakhethi omsebenziAma-sweatshirt wokusebenza we-Allegroamajakhethi omsebenzi amhlopheama-sweatshirt omsebenzi wabesifazaneamajakhethi ama-denim workengelbert strauss amajakhethi womsebenzijula amahembe wokusebenzaamajakhethi omsebenzi wabesilisaamajakhethi womsebenzi afakiweamajazi okusebenza akhombisayoamahembe wokusebenza we-olxama-sweatshi sweatshiAma-Allegro woboya bezingubo zomsebenziisiza samahembe emsebenzini: allegro.plamajack softshell asebenzaizimpunga zomsebenzi ompungaamajakhethi asebenzayo anekhandaama-sweatshirt omsebenzi anokuphrintaama-sweatshirt okusebenza nokuphrinta kwe-Allegroamajakhethi asebusikaamajakhethi omsebenzi afudumelejula amahembe wokusebenzaiziketi ezivulekileama-sweatshirts omsebenzijakethi woboyaamasiketi wokusebenza ashibhileizingubo zokugqoka izithukuthuku
4.9 / 5 ( 16 amavoti )